တိုယိုတာကုမ္ပဏီ Hybrid ကားအရောင်း စံချိန်တင် | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Used Cars (1051)	Sedan (300)
Home » News » တိုယိုတာကုမ္ပဏီ Hybrid ကားအရောင်း စံချိန်တင်
admin | News | June 13, 2012
Cameron Diaz, Jukia Roberts, Natalie Portman, Tom Hanks, Lenonardo Di Caprio စတဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေဟာ အဲဒီ Prius Hyrbid ကားအမျိုးအစားပိုင်ဆိုင်သူများ စာရင်းထဲမှာ ပါကြတယ်။ Prius Hyrbid ကားကို ပိုင်ဆိုင်သူ အကျော်အမော်များကလည်း “ဟောလိဝုဒ် ရဲ့  Ethical အကျဆုံး ပြယုဂ် celebrity” ဆိုပြီး တင်စားနေကြပါတယ်။ ကောလဟလအဖြစ်ထွက်ပေါ်နေတာကတော့ တိုက်တန်းနစ် မင်းသားဟာ Prius Hybrid ကားငါးစီးတောင် ပိုင်ဆိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
3,731 total views,3today Print
11 Responses to “တိုယိုတာကုမ္ပဏီ Hybrid ကားအရောင်း စံချိန်တင်”
Kyaw Min Tun on June 14, 2012 @ 7:08 am Toyota Prius က ပိုကောင်းပါတယ်… ခက်တာက Prius ရဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါက 1800 cc နဲ့1500 cc ဖြစ်နေတော့ Honda Insight လို 1300 cc တွေလို Model ခပ်မြင့်မြင့် သွင်းလို့ မရ ဖြစ်နေတယ်.
Reply Kyaw Min Tun on June 14, 2012 @ 7:11 am Nissan Leaf လို EV ( Electric Vehicle ) တွေလဲ သွင်းလာကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…. Zero Emission..ဖြစ်တဲ့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရာလဲ ရောက်ပါတယ်.
Reply Ko Moe on June 15, 2012 @ 2:29 am Toyota Prius ကိုပိုကြိုက်တယ်.
Reply Myo Han on June 16, 2012 @ 2:59 pm toyota ko po kyite tal.
Reply Khin Mgoo on June 27, 2012 @ 11:05 am honda insight ka po kaung par tal.
Reply Soethihalwin Lwin on June 30, 2012 @ 5:11 am The prize of cars are so chief, oversea actors were so poor.
Reply Bwe Bwe Lay on June 30, 2012 @ 5:37 am Toyota Prius ကိုပိုကြိုက်တယ်..ဝယ်စီးချင်တယ်…သွင်းတဲ့သူများရှိပါသလား.
Reply Komglay Pku on July 10, 2012 @ 9:20 am toyotapriusဈေးတင်ပေးကြပါဝယ်ချင်လို့ပါ
Reply Han KoKo Soe on July 11, 2012 @ 7:37 am Prius က အင်ဂျင်ပါဝါ Insight ထက် ပိုကြီးပေမယ့် ဆီစားမှာ ပိုသက်သာတယ်လို့ catalouge မှာ သိရတယ်။.
Reply Han KoKo Soe on July 11, 2012 @ 7:39 am ကားရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုက ရေရှည်မှာ Prius က ပိုသာလိမ့်မယ်။.
Reply Thet Kyaw Khaing on July 17, 2012 @ 8:21 am ကား ကတော့ environment အတွက် friendly ဖြစ်ပါတယ်.environment (လမ်းတွေ)ကရော ကား အတွက် friendly ဖြစ်ရဲ့လားလို့…..
Toyota Hilux Surf	1300 cc car Tyres	Facts to be careful before purchasingacar	price of 1300cc car	mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများBrevis (85 views)TOYOTA CROWN ROYAL SALOON - G (67 views)TOYOTA VISTA (DIESEL AUTO) (60 views)Toyota Alphard (59 views)2007 TOYOTA ISIS 2.0 PLATANA (7 seater) (58 views)toyota belta(2007) (58 views)HONDA CR-V 99 (56 views)e36 ( 318 i ) (51 views)Nissan AD Van (49 views)TOYOTA HILUX SURF SSR X LIMITED 1998 (48 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.